महिलामा मात्र हुने पाँच प्राणघातक रोग – sagunkhabar.com
महिलामा मात्र हुने पाँच प्राणघातक रोग
रोगले धनी-गरिब भन्दैन । सानो-ठूलो भन्दैन । महिला-पुरुष भन्दैन । हामी यस्तै मान्यता राख्छौं ।तर, कतिपय रोग यस्ता हुन्छन् जो पुरुषलाई मात्र वा महिलालाई बढी असर गर्न सक्छ । जस्तो प्रोस्टेट क्यान्सर पुरुषलाई लाग्छ, स्तन क्यान्सर महिलालाई । भलै स्तन क्यान्सर पुरुषलाई पनि लाग्न सक्छ, तर दुलर्भ मात्रामा ।
स्तन क्यान्सर महिलाहरुमा हुने क्यान्सर मध्यको प्रमुख हो । नेपालमा करिब चार प्रतिशत पुरुषमा मात्र स्तन क्यान्सरको समस्या देखिएको छ । तर जनचेतनाको कमी तथा भयका कारण महिलाहरु महिलाहरु स्तन क्यान्सरको जाँचको लागि समयमै अस्पताल जाँदैनन्।
जसले गर्दा उनीहरुमा स्तन क्यान्सरको जोखिम बढ्ने गर्छ । समयमै उपचार गरेको खण्डमा स्तन क्यान्सको उपचार सम्भव छ । यसको लागि समयमै स्तनको स्कि्रनिङ्ग जरुरी छ ।
यद्यपी, यो रोगबारे अझै पनि धेरै महिला अनविज्ञ छन् । त्यसैले, यसको जोखिमबारे धेरैलाई जानकारी नहुनस सक्छ ।
ब्रम्हास्त्रमा रणवीरको नयाँ अवतार
गर्भावस्थामा होली खेल्नु हुन्छ ? कस्तो रंग घातक ? कस्तो रंग प्रयोग गर्ने त ? यस्तो छ…
झापाका ८३ वर्षीय बुवा(बा)का आँखा डोल्पाका १० बर्षीय बालकलाई दान !